Marketer taloha mifanohitra amin'ny New Marketer. Iza ianao? | Martech Zone
Marketer taloha mifanohitra amin'ny New Marketer. Iza ianao?
Alarobia, Septambra 23, 2009 Douglas Karr
Rehefa namaky tamin'ny alàlan'ny fikarohana sasantsasany tamin'ny tranokala Alterian aho dia sendra ilay kisary mahafinaritra momba azy ireo fiaraha-mientan'ny mpanjifa page. Mampiseho tsara ny fomba niovan'ny marketing ny kisary. Ny famerenana ity kisary ity dia tokony hazava tsara raha nivoatra na tsia ny varotrao.
Nivoatra tamin'ny naha-Marketer anao ve ianao? Manana ny orinasanao?
Androany aho dia nandany fotoana tamin'ny vinavina 3 samihafa ary ny antony mahazatra izay tsy nivoaran'izy ireo dia tahotra, loharanon-karena, ary fahaizany. Heveriko fa manondro ny antony maha-zava-dehibe ny fitazonana ny fanampian'ny an consultant marketing amin'ny Internet. Afaka manome valiny azo refesina sy fomba mahomby hampihenana ny loharanom-pahalalana ilaina… izy ireo mandritra ny fotoana rehetra hampiala ny tahotra.
Tags: adfamaritana marikacuralatefiaraha-miasa amin'ny mailakamulti-mikasikapersonalization amin'ny Internetfamokaranateknolojia fivarotanafifandraisan'ny tranonkalaWordPress
Antony 3 hanakaramana orinasa PR
Tandremo fa malaza amin'ny Internet
Sep 24, 2009 amin'ny 11: 40 AM
Ny marketing amin'izao fotoana izao koa dia mitaky fatra mavesatra amin'ny teknolojia noho ny fomba nanjary ampahany lehibe amin'ny tontolo iainantsika ny fifandraisana. Ireo "mpamatsy fiambenana famantaranandro" rehetra. ny 50 mahery dia tsy mahazo aina amin'ny haitao ary mbola tsy mahatakatra kokoa ny famahanana bilaogy ary ny sisa amin'ny 'entana' izay tonga hatrany amintsika haingana be. Araka ny voalazanao, Doug, mpanolo-tsaina an-tserasera dia manan-danja tokoa ary manana andraikitra roa lehibe ankehitriny: ny fiofanana sy ny fanomezan-toky .. Amin'izay vao manomboka ny tahotra.
Sep 24, 2009 ao amin'ny 2: PM PM
Tsy azoko antoka fa marina ilay voalaza 'mihoatra ny 50', na izany aza. Ny fitomboan'ny tambajotra toy ny facebook dia mahita fitomboana haingana amin'ireo olon-dehibe noho ny tanora kokoa. Vetivety dia mandray ny tanora, fa ny zokiny kosa mandray rehefa mahita ny sandany. Nahazo tambajotra sosialy ho an'ny Navy Vets izay salan'isa mihoatra ny 50 taona - ary ireo olona ireo dia mampakatra sary, mandefa ny bilaogin'izy ireo manokana, mandray anjara amin'ny forum ... tena nifandray izy ireo!
Oct 4, 2009 amin'ny 9: 56 AM
Maherin'ny 50 taona aho ary tiako ny famantaranandro. Manana orinasam-pandraisana fampiantranoana ePortfolio maimaim-poana aho saingy miombon-kevitra amin'i Jim aho fa ny 50 taona mahery dia tsy mahazo aina amin'ny teknolojia. Amin'ny maha-mpampianatra ahy amin'ny fahaizan'ny boky ary na dia efa niady nandritra ny taona maro aza aho niaraka tamin'ireo mpianatra nahazo diplaoma izay tsy mahazo aina amin'izany. Misaotra an'Andriamanitra noho ny Facebook fa nanova ny tontolo io. Izao hoy aho - mampiasa Facebook ve ianao ary raha eny ny valiny (izay matetika no izy) dia lazaiko tsara fa afaka mampiasa bilaogy, wiki, twitter na media hafa ianao avy eo. Manomboka amin'ny taona 50 mahery io fa miadana. Ny olana lehibe indrindra anentananako ny ePort portfolio dia ny mpampianatra fa tsy ny mpianatra. Nampahafantatra ny mpampianatra ho mpampianatra aho ary mandeha tsara izany. Fanofanana sy fanomezan-toky no lakilena. Misaotra tamin'ny lahatsoratra. Salam, Ian Knox
Sep 24, 2009 ao amin'ny 1: PM PM
Miombon-kevitra amin'ny hevitrao rehetra aho, afa-tsy, Fantatsika - Amin'ny maha-mpivarotra antsika dia mahafantatra bebe kokoa momba ny tsenanay sy ny mpanjifanay izahay avy eo, tamin'ny fomba taloha no nanaovanay izany, saingy mbola misy ilàna ny fifampidinihana sy ny fivoahan'ny finoana amin'ny marketing ankehitriny.
Eny, angamba izy ireo dia nilaza tsara kokoa hoe 'Afaka mamantatra isika'. 🙂 Heveriko fa ny fotony dia tsy mila mihetsika amin'ny intuition irery intsony isika. Androany tsara kokoa isika manao fikarohana mba hanampiana ny fanapahan-kevitra momba ny varotra!
5 Okt 2009 amin'ny 3:13 PM
Miombon-kevitra aminao Lorraine. Afaka manakaiky kokoa ny "fahalalana" isika amin'ny alàlan'ny fananana angona tena tsara kokoa avy amin'ny analytics. Tsy dia misy tombantombana loatra amin'izany. Amin'ny lafiny sasany, mora kokoa ny varotra tamin'ny andro talohan'ny Internet tamin'ny fananana safidy vitsy kokoa hodinihina: Fahitalavitra, haino aman-jery, marketing mivantana amin'ny alàlan'ny fangatahana mailaka sy finday. Amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny safidy marobe amin'ny varotra an-tserasera, indrindra ny fananana haino aman-jery sosialy ao anaty fifangaroana, ny safidin'ny marketing dia samy hafa be lavitra. Mbola misy tombantombana ihany koa mifandraika amin'ireo safidy tsy takatra mistika izay manasa ny fotoana mety sy ny loza mety hitranga.
Oct 6, 2009 amin'ny 6: 09 AM
Tsy tokony ho 'vaovao' izany, fa ahoana kosa ny eritreretintsika> Izahay dia manandrana.